को–को आउँदैछन् विशाल जनसभालाई संबोधन गर्न ? यस्तो छ विप्लवको तयारी — Imandarmedia.com
को–को आउँदैछन् विशाल जनसभालाई संबोधन गर्न ? यस्तो छ विप्लवको तयारी
काठमाडौ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसहित ६ राजनीतिक पार्टी र दुईवटाले संयुक्त रुपमा भोली एमसीसी विरुद्ध विशाल जनसभाको आयोजना गरेका छन्। उक्त जनसभामा मोर्चाभन्दा बाहिरका एमसीसी विरोधी नेताहरुलाई पनि सहभागी गराइने भएको छ।
त्यसका लागि नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले एमसीसी विरोधी माहोल बनाउन दौडधूप थालेका छन्। उनले एमसीसीको विरोधमा रहेका विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुसँग भेटवार्ता गरेर लबिङ थालेका हुन्।
उनले बुधबारमात्रै नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेसँग भेटवार्ता गरेका छन्।
विप्लवले उनहरुकै निवासमा पुगेर भेटवार्ता गरेका हुन्। सो क्रममा विप्लवले एमसीसी विरोधीहरु ध्रुवीकृत हुनुपर्नेमा जोड दिएको बताइएको छ। साथै भोलीको जनसभालाई सम्बोधनका लागि आग्रह पनि गरेका छन्।
उनीहरुले सहभागिताका लागि आफूहरुलाई गरेको निमन्त्रणाले उत्साहित भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए। उक्त जनसभामा झलनाथ खना, नारायणकाजी श्रेष्ठ, भिम रावल, नारायणमान विजुक्ष, मोहन विक्रम सिंह, मोहन बैद्य लगायतका नेताहरुको सहभागिता हुनेछ।
को को सहभागी हुने र कसले सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा यसको पुरा विवरणसहितको जानकारी आज बेलुका गराइने नेकपा श्रोतले जानकारी दिएको छ।
विप्लवसहितका केही कम्युनिस्ट घटकहरुले एमसीसी विरोधी अभियान चलाइरहेको बेला विप्लवले एमसीसीकै विरोधमा रहेका नेताहरुसँग भेटवार्ता गरेका हुन् ।
भेटपछि नेकपाका प्रवक्ता प्रकाण्डले देशभक्त, राष्ट्रवादी र स्वाधिनताका पक्षधरहरु एकीकृत र ध्रुवीकृत हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । बुधबार नै विप्लवसहितका साना ६ दल र दुई मोर्चाले एमसीसीको विरोधमा आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए ।
साना दल र मोर्चाले यही फागुन २० गतेदेखि चैत ६ गतेसम्म आन्दोलन गर्ने जनाएका छन् । २० गते काठमाडौं उपत्यकामा विशाल प्रदर्शन र विरोध सभा, २२ गते बुद्धिजिविसँग अन्तक्रिया, २
४ गते देशव्यापि प्रदर्शन, २६ गते विद्यार्थीहरुले देशभरिका क्याम्पसमा पर्दशन तथा विरोध गर्ने, २८ गते युवाहरुको विरोध प्रदर्शन, ३० गते मजदूरहरुको देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
यस्तै चैत २ गते किसानहरुको विरोध प्रदर्शन, ४ गते श्रमिक तथा दलीतको विरोध प्रदर्शन, ६ गते राष्ट्रिय मोर्चा क्षेत्रीय र जातीय मोर्चाहरुले विरोध प्रदर्शन गर्ने जनाइएको छ ।
सरकारले आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट एमसीसी पास गरेको थियो । त्यसको विरोधमा साना दल र मोर्चाले आन्दोलन गर्दै आएका छन्।
तेस्तै,नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ पार्टी फुटाउने अन्तिम तयारीमा छन्। अमेरिकी सहयोग परियोजनामा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले आत्मसमर्पण गरेपछि श्रेष्ठ पार्टी फुटाउने अन्तिम चरणमा पुगेका हुन्।
दुई शीर्ष नेताहरुबीच मनमुटाव बढेपछि पार्टी फुटको चरणमा पुगेको हो। उनीहरुबीचको विवाद यतिसम्म पुगिसक्यो कि दाहालले पार्टी त्यागेर जान सक्ने सांकेतिक स्वीकृतिसमेत दिइसकेका छन्।
नारायणकाजीले बनाउने नयाँ पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकताकेन्द्र) हुने भएको छन् । श्रेष्ठ निकट श्रोतले दिएको जानकारी अनुसार यो पार्टीको अध्यक्ष श्रेष्ठ स्वयम हुनेछन् भने महासचिव गिरिराजमणि पोखरेल वा लिलामणि पोखरेल मध्ये एक बन्ने छन् ।
हुन त विगतमा पनि माओवादी केन्द्रबाट शीर्ष नेताहरु नछुटिएका भने होइन । विभिन्न कारण वा पदको स्वार्थले पटक पटक माओवादीबाट शीर्ष नेताहरु छुटिदँै आएका छन् ।
तर यसपटक भने कुनै व्यक्तिगत स्वार्थले नभई अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) सम्झौताले पार्टी त्यागेर जान सकिनेसम्मको आशयको अभिव्यक्ति आएको हो ।
नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतका नेताहरूको असहमतिका बीच प्रचण्डले व्याख्यात्मक घोषणा गरेर सम्झौता अनुमोदन गरेपछि दुई चिरा परेको माओवादीमा अध्यक्ष प्रचण्डले खुमलटारस्थित पत्रकार सम्मेलनमा ‘पार्टी छाडेर जाँदा हुने’ अभिव्यक्ति दिएका थिए । जसले नारायणकाजी श्रेष्ठलाई सोच्न बाध्य बनाएको छ ।
माओवादी प्रचण्डकै इसारामा चल्छ भन्ने त सबैलाई थाहा नै भएको कुरा हो । तर, प्रचण्डको यस्तो खाले अभिव्यक्तिले यी दुईबीचको मनमुटावको व्याख्या त गर्छ नै साथै, यसले माओवादीमा पार्टी फुटको श्रृङ्खलाले पनि निरन्तरता पाउने आशंका गर्न सकिन्छ।
यसअघि पनि मोहन वैद्य किरण, नेत्रविक्रम चन्द विप्लव, रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी जस्ता प्रभावशाली नेताहरु माओवादी केन्द्र परित्याग गरिसकेका छन्।
यसैबीच, यता सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’बीच बुधबार बिहान भेटवार्ता भयो । उक्त भेटवार्ताले माओवादी पार्टी पंक्तीमा खैलाबैला नै मच्चियो।
श्रेष्ठ निवास हरिसिद्दिमा दुई नेताबीच ३ घण्टा लामो छलफल सम्पन्न भएको छ। प्रतिनिधि सभाबाट अमेरिकी सहायता सम्झौता अनुमोदनमा आफ्नो पार्टी पनि संलग्न भएपछि नेता श्रेष्ठ अध्यक्ष प्रचण्डसँग असन्तुष्ट बनेका मात्रै छैनन् उनी पार्टीमै नबस्ने मुडमा पुगिसकेका छन् ।
यसबीच प्रचण्डले श्रेष्ठबारे टिप्पणी गर्दै चित्त नबुझे पार्टी छाड्न पनि सकिने भनेपछि उनी झन् फायर बनेका छन् । यहीबीच विप्लव पार्टी एकता गर्ने प्रस्ताव लिएर श्रेष्ठकहाँ पुगेपछि उनी अब पार्टीमा नबस्ने लगभग पक्कापक्की भएको छ । यसअघि मंगलबार श्रेष्ठ फकाउन प्रचण्ड उनको निवास पुगेका थिए ।
श्रेष्ठले पूर्वएकता केन्द्र ब्युँताउने तयारी गरिरहेका बेला विप्लवले उनीसँग भेटवार्ता गरेका हुन् । सुरुमा एमसीसी संशोधन र परिमार्जन नगरी संसदबाट अनुमोदन गर्न नहुने अडान लिइरहेका नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले सत्ता गठबन्धन जोगाउन ‘व्याख्यात्मक घोषणा’सहित एमसीसी पारित गर्न सहमत भएका हुन्।
सोही सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सहकार्यका लागि एमालेसँग जारी वार्ता रोके। गत आइतबार प्रतिनिधि सभाबाट एमसीसी बहुमतले पारित गराए ।
विप्लव नेतृत्वको नेकपालगायत ६ कम्युनिस्ट पार्टी र दुई मोर्चाले एमसीसी खारेज गरिनुपर्ने माग राखेर संयुक्त रूपमा सडक आन्दोलनदेखि नेपाल बन्दसम्मका कार्यक्रम गरिरहेका छन्। एमसीसी अनुमोदन गरिएपछि विप्लवले पनि प्रचण्डको आलोचना गरिरहेका छन्।